करको दायरा विस्तार | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय करको दायरा विस्तार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत करको दायरालाई विस्तार गरेको छ । कर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा बढाउनु सकारात्मक हो । करको दायरामा नपरेको क्षेत्र यसबाट असन्तुष्ट बने पनि यसले राजस्वको दिगो व्यवस्थापन गर्छ । तर, अझै करको दायरामा ल्याउन बाँकी क्षेत्रहरू छन् ।
नेपालको कर प्रशासन करमैत्री नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैले करको नाम सुन्नासाथ धेरै जना तर्सिने गरेका छन् । कर तिर्न मन नलागेर भन्दा पनि कर तिर्दा झन्झटमा फसिने डरले मानिसहरू सकेसम्म कर कार्यालय जान खोज्दैनन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन २०५२ ले नगरपालिका र महानगर क्षेत्रमा लगाउँदै आएका विभिन्न शीर्षकका करलाई देशभरि लगाउन लागिएको छ । त्यस्तै, कृषि उपजको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण, कानूनी सेवालाई पनि भ्याटमा आउन अनिवार्य गरिएको छ । सिन्डिकेट अन्त्य गर्न यातायात समितिहरूलाई कम्पनीमा आउन अनिवार्य गरेर यातायात क्षेत्रलाई पनि भ्याटमा दायरामा ल्याइएको छ । यसरी भ्याटको क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो । राजस्व वृद्धि गर्दा कर तिरिरहेकाहरूमाथि नै थप बोझ थपिन्छ । तर, नयाँनयाँ क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदा करको दर बढाउनुपर्ने हुँदैन ।
कृषि आयलाई अझै करको दायरामा ल्याइएको छैन । कोचिङ सेन्टर, ट्युशन र अन्य व्यवसाय पनि करको दायरामा अझै ल्याइएका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटबाट करको दायरामा ल्याउन लागिएका क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई भ्याट अनिवार्य गरिएकामा विरोध जनाएका छन् । कुनै पनि व्यावसायिक सेवा दिने संस्था भ्याटमा दर्ता हुनु स्वाभाविक भए पनि किन विरोध भइरहेको छ ? किन व्यवसायीहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्दा तर्सिन्छन् त ?
नेपालको कर प्रशासन करमैत्री नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैले करको नाम सुन्नासाथ धेरै जना तर्सिने गरेका छन् । कर तिर्न मन नलागेरभन्दा पनि कर तिर्दा झन्झटमा फसिने डरले मानिसहरू सकेसम्म कर कार्यालय जान खोज्दैनन् । कर प्रशासनमा सुधारका लागि हरेक अर्थमन्त्रीले प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् । केही सुधार पनि भएको छ तर आममानिस र व्यवसायीले अझै सहज तरीकाले कर तिर्न पाइरहेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो : कर कार्यालयको व्यवहार ।
कर तिर्नेहरूले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र पाउन निकै सकस भोग्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा ‘कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउने’ बताए पनि कर कार्यालयले भने कर विवरणको फाइल बुझाएको पत्र मात्रै दिन्छ । त्यस्तै कतिपय कर तिरिसके पनि त्यो अन्तिम कर हो भनेर कर प्रशासनले भन्दैन । यस्तोमा सरकारले वस्तु किनबेचको भ्याट खरीदकर्ता र विक्रेताबाट आधा आधा अर्थात् दुवैबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत उठाउने नया“ व्यवस्थाले त झनै करदातालाई तर्साएको छ ।
स्रोतमा करकट्टी गर्ने पुरानै व्यवस्थामा व्यवसायीहरूले थुप्रै झन्झट बेहोरिसकेका छन् । विक्रेता व्यवसायीले कर तिरे पनि क्रेता व्यवसायीले स्रोतमा कट्टी गरेको कर रकम तिरेन भने कर कार्यालयले विक्रेतालाई नै त्यो बाँकी कर तिराउन किचकिच गर्छ । अहिले नै पनि भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले भुक्तानी लिँदा अर्को पाटीले तिर्नुपर्ने १ दशमलव ५ प्रतिशत कर नतिरेको भन्दै भुक्तानी लिने कम्पनीलाई नै तिराउने गरिएको छ । यस्तो कर सम्बद्ध व्यवसायीबाटै उठाउने दायित्व कर कार्यालयकै भए पनि उनीहरू त्यसो गर्नुभन्दा आफूलाई जे गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने गर्छन् । अर्को, कर कार्यालयहरूलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको छ । कर कार्यालयप्रति नकारात्मक धारणा आउनुको कारण जनता होइनन्, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नै हुन् वा कर प्रशासनको प्रणाली नै हो । एउटा कर कार्यालयको अर्को कर कार्यालयसँग समन्वय नभएर पनि यस्तो भएको छ । कर करकापले नै तिर्ने हो तर तिर्ने काम झन्झटिलो हुनु हुँदैन । त्यसैले कर प्रशासनमा व्यापक सुधार जरुरी छ ।
कर्मचारीलाई बाँडेर बचेको बोनस रकममा पनि कर
कृषि आयमा पनि करको सम्भावना